Mogadishu Journal » 2017 » June » 19
Xiyaarada Qatar oo la sheegay in ay sanado sii socon doonta
Mjournal :-Wasiiru Dowlaha arrimaha dibada wadanka Imaaraadka Carabta Anwar Gargash ayaa sheegay in xayiraada dhinaca diblumaasiyada ah ee saaran dalka Qadar inay socon karto muddo sanooyin ah. Gargash oo warkan ka sheegay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyay...
Madaxii amniyeedka Al-shabaab ee gobolka ee gobolka Banaadir oo la qabtay
Mjournal :- Wasiirka Amniga ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa goor dhow shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen Sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Shir jaraa’id oo uu ku qabtay Madaxtooyada ayuu ku sheegay in Sarkaalkan uu...
Booliiska Kenya oo gacanta ku dhigay dad doonayay in ay weeraro geystaan
Mjournal :-Ciidamada Booliska magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay 4 ruux looga shakiyay inay qorsheynayeen inay geystaan weeraro, inta lgu guda jiro dabaal dega maalmaha Ciida ee nagu soo fool leh. Raggan la soo qabtay ayaa lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin...
Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka guddomay Faadumo Dayib
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta Faadumo dayib oo ka mid aheyd Murashaxiintii Madaxweyne ee Soomaaliya u magacaabay in ay noqoto Madaxa Haweenka Soomaaliyeed ee Q.M. Faadumo Dayib ayaa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo kula kulantay Xarunta...
The area of London where a vehicle hit pedestrians early Monday local time is ethnically diverse and home to a large Muslim community. Finsbury Park is part of the Islington borough of north London, where around 10% (19,500) of the borough’s total population are Muslim....
The Qatari defence ministry has announced the arrival of the first group of Turkish soldiers in the capital, Doha, to take part in joint military exercises. The forces conducted their first training at Tariq bin Ziyad military base on Sunday, the ministry said. The exercises,...
Mjournal :- C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole Madaxwenihii hore ee Punland hadana ah Xildhibaan katirsan Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaalia ayaa weerarka afka ah ku qaaday Wsaiirka Dastuurka Xukuumada Soomaaliya. Sanatar Faroole ayaa ku eedeeyay Wasiirka Dasuurka...
Magaalada London dad masjid ka soo baxay oo gaari la jiirsiiyay
Mjournal :-Booliiska magaalada London ayaa sheegaya in baabuur la jiirsiiyay dad ka soo baxay masaajid ku yaala magaalada London xaley xili ay ka soo baxayeen salaada taraawiixda. Booliska ayaa xaqiijiyey dhimashada hal qof iyo dhaawaca 8 qof oo kale. Gaari Van ah ayaa la sheegey...
Maxkmada ciidamada oo xukun dil ah ku riday askarigii dilay Wasiir Cabbaas
Mjournal :- Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida dowlada Soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah ku riday askarigii ka dambeeyay dilkii magaalada Muqdisho loogu geestay Allaha u naxariisee Wasiirkii Howlaha Guud ee Xukuumada Soomaalia Cabaas Sheekh Siraaji. Kiiska dilka Wasiir Cabaas...